सबै समय मा, महिला अनावश्यक बाल हटाउन हरेक प्रयास गरेका छन्। आफ्नो हटाउनका लागि विधिहरू धेरै विविध र निरन्तर सुधार छन्।
माथिल्लो ओठ माथि कपाल को कारण
महिला सबैभन्दा साधारण सौंदर्य प्रक्रिया फोटो-epilation एन्टेनाइग्यालेक्सिज छ। कि माथिल्लो ओठ मा बढ्न र यी hairs धेरै भ्रमित महिलाहरु को उपस्थिति बिगार्छ।
आफ्नो कारण के हो? एक कारक बंशाणु छ। यो अक्सर मेरी हजुरआमा वा मेरो आमा mustaches वृद्धि घटनाको नै प्रकट। महिला स्लाव भाषाहरु प्रकार को लागि, तिनीहरूले नियम, अदृश्य fluff, लगभग छ ठीक hairs को निर्वाचकगण, माथिल्लो ओठ छ। तर हिस्पानिक र अर्मेनियन महिला देखिने एन्टेनाइग्यालेक्सिज। यो कपाल को pigmentation कारण हो।
सौंदर्य दोष अर्को कारण ब्यालेन्स हर्मोन को एक बाधा छ। यो कारणले गर्दा हाम्रो ग्रह को धेरै क्षेत्रहरु मा पर्यावरणीय अवस्था को गिरावट गर्न हुन्छ। यो कारक जवान महिला पुरुष सेक्स हर्मोन, माथिल्लो ओठ मा बाल को वृद्धि वृद्धि हुन जो हावी गर्न थालेका छन् भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। एउटै अवस्था menopausal उमेर महिलाहरु प्राय हुन्छ। तिनीहरूले पहिले त्यहाँ थिएनन् कि लामो hairs को उपस्थिति नोटिस सक्छ।
बाल हटाउनका लागि प्रक्रिया
आज को रूपमा, तपाईं फरक तरिका प्रयोग गरेर अनावश्यक बाल हटाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा यी लोकप्रिय ज्योति कपाल हटाउने छ। बारी मा, यो लेजर र photoepilation विभाजन गरिएको छ। यी प्रक्रियाहरू संग शामिल प्रविधि, जटिल छैन। यसलाई हल्का छालहरू प्रयोग आधारित छ।
photoepilation कसरी बनाउने? यसको खण्डमा एक क्लिनिक फेला पार्न आवश्यक हुनेछ लागि, सकारात्मक प्रतिक्रिया जो मा तपाईं विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त गरेका छौं। मात्र त्यहाँ बाहिर उनको माथिल्लो ओठ मा epilation लगे हुनुपर्छ।
प्रशंसापत्र इच्छित परिणाम प्राप्त भएको एक सय प्रतिशत ग्यारेन्टी छैन। अनावश्यक कपाल हटाउँदै अघि, एक पेशेवर cosmetologist परामर्श गर्न सिफारिस गरिएको छ। उहाँले प्रक्रिया को merits बारेमा र फोटो-epilation मा निहित जोखिम तपाईं चेतावनी हुनेछ। मूल्यहरु मा प्रक्रिया व्यापक दायरामा फरक हुन्छन्। तिनीहरूले अनावश्यक बाल अवस्थित जसमा क्षेत्र को आकार, र विशेष उपकरण को चमक को संख्या निर्भर भन्ने तथ्यलाई।
को परामर्श समयमा, विशेषज्ञ तपाईं प्रक्रिया को लागि तयार गर्न सक्षम हुने निम्न विशेष सिफारिसहरू, दिनेछु। तिनीहरूले लेख्न मात्र सम्झना महत्त्वपूर्ण कुरा, तर पनि हो। यो अनावश्यक नतिजा रोक्न हुनेछ। उदाहरणका लागि, प्रक्रिया अघि एक हप्ता, तपाईं सना वा बाफ स्नान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा तातो स्नान लिन र उमालेको गरेर अनुहार सफा। उपचार क्षेत्र छैन प्रत्यक्ष सूर्यका वा धूपघडी मा विकिरण पराबैंगनी उजागर गर्नुपर्छ। यो चेतावनी संग महिलाहरु को लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ कालो छाला, तीव्र तन झुकाउ।
प्रक्रिया cosmetologist दिन मा तपाईं फेरि छलफल गर्नेछन्। तपाईं उपकरण को हानिकारक प्रभाव तपाईंको आँखा जोगाउन विशेष चश्मा दिइनेछ। प्रक्रिया नै जहाँ तपाईं गाढा hairs छ छाला क्षेत्र ह्याण्डल जो फैलने एक श्रृंखला छ। यो विकिरण खराब वनस्पति कालो रंग को कारण छ जो रोगन melanin, द्वारा अवशोषित हुन्छ। यस मामला मा, एक बाल बल्ब अप गर्मी र मर्नेछन्। अधिकतम प्रभाव लागि यो कम से कम पाँच सात पटक उनको माथिल्लो ओठ मा epilation आयोजित थियो आवश्यक छ। प्रशंसापत्र कि सत्र को मात्र संख्या तपाईं अनावश्यक कपाल को वृद्धि रोक्न अनुमति दिन्छ भन्छन्। प्रभाव 6-8 वर्ष पछिल्लो हुनेछ। तथापि, सबैलाई epilation किन्न सक्छन्। मूल्यहरु यी प्रक्रियाहरु लागि एकदम उच्च हो। प्रति सत्र लागत सय एक बीच डलर छ।
बाल हटाउनका लागि उपकरण
अनावश्यक कपाल को छुटकारा रही लागि प्रक्रिया सौंदर्य सैलून सबैभन्दा उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग संग जडान थप उपलब्ध छ। यसरी, बाल हटाउनका लागि उपकरण उच्च तीव्रता स्पंदित बीम को छाला प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण UPL प्रविधि आवेदन डिजाइन गरिएको छ।
कपाल हटाउने क्लीनिक को लागि एक Multifunctional उपकरण धन्यवाद सौंदर्य चिकित्सा को क्षेत्र मा आफ्नो सेवा पेशकश गर्दै छन्, यो सबै भन्दा अनुकूलित छ। को टेक्नीसियन सञ्चालन तिनीहरूलाई आपूर्ति दलहन को प्रभाव उपकरणको ऊर्जा, साथै अवधि र आवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रकाश चमक को एकाइ अन्तराल र तिनीहरूलाई को संख्या मा नियमन। यो छाला को इच्छित गहिराई गर्न भित्र पस्नु गर्न गर्मी सक्षम रूपमा यी मापदण्डहरू परिवर्तन, एन्टेनाइग्यालेक्सिज को राम्रो हटाउनका लागि आवश्यक छ। मा गहिरो - यो कठिन र गाढा कारण कपाल follicles को dermis माथिल्लो पत्रहरु मा प्रकाश कि ठीक बाल झूट तथ्यलाई छ, र।
बाल हटाउनका लागि उपकरण घर प्रयोगको लागि खरिद गर्न सकिन्छ। यद्यपि, उच्च लागत $ 600 लिएर यसलाई किन्न, सबै गर्न सक्दैन। तर एकै समयमा यो यस्तो उपकरण epilation बाहिर कि हुँदैन उनको माथिल्लो ओठ मा हुन मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। अतिथि विशेषज्ञहरु क्षेत्र को लागि आत्म-उपयोग उपकरणको impossibility बारेमा चेतावनी छन्। को स्पंदित रेज आँखाले आकस्मिक सम्पर्क को मामला मा रेटिना बिगार्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई।
कपाल हटाउने को दर
जो समयमा उच्च-तीव्रता स्पंदित बीम, प्रभावित गर्न सक्षम लागू प्रक्रिया मात्र hairs सक्रिय वृद्धि अवधि छन्। त्यो परिपक्व र लामो छ। यो मानव शरीर मा बाल वृद्धि वर्दी छैन भनेर चिनिन्छ। तिनीहरूलाई को एक, विकास गर्न सुरु यो समयमा अन्य पतन, र अझै पनि अरूलाई "निद्रामा" चरण छन्। यस असर epilation (फोटो प्रक्रिया को तल हेर्नुहोस्)?
एक हेरफेर सत्र, एक सना मा आयोजित, कपाल को मात्र देखिने भाग हटाउनेछ। समय, प्रक्रिया दोहोर्याउन आवश्यकता बारम्बार। यो आवश्यकता पूर्व को "निद्रामा" राज्य थिए जो बाल को वृद्धि देखि उत्पन्न हुन्छ। Photoepilation, सामान्यतया दुई हप्ता को सत्र बीचको ब्रेक संग एक पाठ्यक्रम निर्धारित छन्।
किन धेरै ग्राहकहरु तिनीहरू केवल माथिल्लो ओठ epilation माथि आयोजित भन्ने रुचि? समीक्षा दुवै सरल र पीडारहित को डाटा हेरफेर वर्णन। विपरीत प्रक्रिया शेविंग अनावश्यक कपाल को अतिरिक्त वृद्धि प्रोत्साहित गर्दैन। यो आफ्नो नम्बर एक कमी प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, देखिने प्रभाव पहिले नै पहिलो उपचार पछि हुन्छ। साथै, बाल हटाउने देखि बिल्कुल छाला घाइते छैन। र यो बेला प्रक्रिया को प्रकार छनौट विचार गर्न आवश्यक छ। यो माथिल्लो ओठ छाला होसियार र चनाखो उपचार आवश्यकता विशेष संवेदनशील र नाजुक छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ।
कपाल हटाउने को लाभ को बीच, तपाईं यसलाई एक गैर-सम्पर्क कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो कारक छाला गर्न यांत्रिक क्षति र संक्रमण को likelihood समाप्त।
तर मात्र उनको माथिल्लो ओठ मा विरामीहरु epilation आकर्षित गर्छ। समीक्षा एक दोहरी प्रभाव पार्छन् आफ्नो क्षमता संकेत गर्छ। फोटो कायाकल्प समान छ जो, कार्य को यसको मोड द्वारा प्रक्रिया, पछि, मात्र कुनै पनि संरचना को अनावश्यक hairs समाप्त, तर पनि उपचार क्षेत्र मा झुर्रियाँ मिलेका।
ग्राहकहरु अपिल manipulations अवधिको छ। तसर्थ, सत्र माथिल्लो ओठ पाँच मिनेट लाग्छ मा अनावश्यक hairs हटाउनु।
एक photoepilation को नकारात्मक पक्षहरू के के हुन्? यो नतिजा, दुर्भाग्यवश, अप्रत्याशित छन्। रोगी गरेको छाला मा प्रभाव पूर्वानुमान विशेषज्ञ प्रत्येक मामलामा आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई। त्यो किन सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न डाक्टर उपयुक्त सीप र अनुभव हुनुपर्छ छ। प्रक्रिया चलिरहेको बेला हल्का बीम को अधिकतम शक्ति निर्धारण गर्न आवश्यक छ। धेरै ठूलो मान यसलाई भस्म गर्न सकिन्छ, र कम कपाल follicles को विनाश हुन छैन। साथै, एउटा सानो बीम शक्ति एन्टेनाइग्यालेक्सिज वृद्धि बढावा।
कपाल हटाउने किनभने cosmetologist को व्यावसायिकता को कमी को मात्र होइन उत्पन्न गर्न सक्छ जब बल्न को रूप मा छाला क्षति। आफ्नो उद्भव कम गुणस्तर उपकरण मद्दत गर्छ। बल्न सबैभन्दा उजागर र बढ्तै सुक्खा छाला।
कपाल हटाउने बारेमा विरामीहरु देखि प्रतिक्रिया आधारित यो पनि armpits मा, उदाहरणका लागि प्रयास गर्न सिफारिस गरिएको छ। जब प्रक्रिया को सफलता माथिल्लो ओठ मा बाल हटाउन सहमत गर्न सक्नुहुन्छ।
गर्भावस्था वा स्तनपानको समयमा महिलाहरु माथिल्लो ओठ मा अतिरिक्त बाल हटाउन हतार छैन। अरू के epilation contraindications गर्छ? प्रक्रिया कडाई निम्न समस्या अन्तर्गत निषेधित छ:
- छाला विकार;
- घातक ट्यूमर;
- संक्रामक रोगहरु;
- अल्सर, घाउ, colloidal scars;
- मानसिक विकारहरु।
तपाईं फोटो-epilation आयोजित गरिनेछ अघि, यसलाई contraindications अध्ययन गर्नुपर्छ। माथि वर्णन रोगहरु को उपस्थिति cosmetologist चेतावनी दिए गर्नुपर्छ।
प्रक्रिया पछि छाला हेरविचार
सबै को पहिलो, यो उपचार क्षेत्र रक्सी आधारित पदार्थ लागू गर्नुपर्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। सत्र बीच अन्तराल मा कपाल हटाउने अन्य विधिहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन। यसलाई कडाई sunbathe गर्न निषेध गरिएको छ प्रक्रिया पछि एक महिना भित्र। प्रयोग गर्न अनुमति छैन सनस्क्रीन। तपाईं अनावश्यक बाल हटाउन उपचार पछि पाँच दिन लागि सना र स्नान प्रयोग गर्नु हुँदैन।
यो प्रक्रिया एक विशेष चुच्चो को समस्या क्षेत्र गर्न लागू गरेर बाहिर छ। यसलाई लेजर स्थान भनिन्छ। प्रक्रिया पछि, उपचार छाला सतह edema को उपस्थिति रोक्छ जो एक चिसो संकुचन, लागू गरिएको छ।
यस्तो हेरफेर को सञ्चालनको सिद्धान्त लेजर बाल को कोर ऊर्जा मा प्रभाव निहित। गर्मी परिवर्तन, यो follicle heats र यसलाई नाश।
वा लेजर epilation - कि ती सबै भन्दा राम्रो छ? प्रक्रियाहरु यी दुई प्रकार, सामान्य धेरै छन्। यसलाई त्यसैले अझ प्रभावकारी छ जो एक निर्धारण गर्न धेरै गाह्रो छ।
लेजर र photoepilation धेरै अंक मतभेद छ:
; हार्डवेयर घटक लागि -
- विधि को प्रभाव मा;
- आवश्यक प्रक्रिया र आफ्नो अवधि को संख्या;
- एक सत्र को लागत।
वा लेजर epilation - कि जोखिम को राम्रो तरिका? को मापदण्ड को प्रक्रिया को दोस्रो प्रकार सबैभन्दा बहुमुखी छ। उहाँलाई लागि, एक मिसिन प्रकाश विभिन्न प्रकारका संयोजन सक्षम प्रयोग गरेर। जब लेजर बाल हटाउने एक विशेष उपकरण चयन फारम गरिन्छ। यो छाला र कपाल रंग आधारमा गरिन्छ।
निर्माण र उपकरणहरू प्रयोग सन्दर्भमा गरे लेजर र photoepilation बीच छनोट। तिनीहरूले विभिन्न तरिकामा प्रबन्ध छन्। यसरी, photoepilation सम्पूर्ण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लागि उपकरण मा काम चुच्चो मा पङ्क्तिबद्ध गरिएको छ। यो सम्भव भएको उपचार क्षेत्र को क्षेत्र वृद्धि गर्न बनाउँछ। एक बीम को प्रभाव अन्तर्गत उत्पादन लेजर उपकरण हेरफेर। यो जडान मा पुरुष क्षेत्र क्षेत्र छैन धेरै ठूलो छ। तर, जब थप शक्ति छाला मा रे प्रक्रियाहरु यस प्रकारको।
संख्या र सत्र को लागत
लेजर बाल हटाउने फाइदाको प्रत्येक follicle व्यवहार गर्न आफ्नो क्षमता भन्छन्। यो कम उपचार मा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। तर सत्र को अवधि को दृश्य को बिन्दुबाट, लेजर बाल हटाउने द्वारा अनावश्यक कपाल को उन्मूलन कमसल छ। पन्ध्र मिनेट लागि खर्च।
लागत लागि जाँदा, दुवै तरिका - छैन सस्तो छ। तथापि, आधा बारेमा लेजर बाल हटाउने लागत धेरै (लगभग पचास डलर प्रति सत्र)।
जो विधि ग्राहक गर्न समाधान गर्न प्राथमिकता दिन। दुवै प्रक्रिया संग परिणाम नै बारे प्राप्त हुनेछ।
"गणेश" - भारतीय संस्कृति को प्रशंसक लागि आदिवासी टाटु
नौसेना टैटू - प्रतीक र आकर्षण
धार्मिक टाटु - टैटू को दुनिया मा एक महत्वपूर्ण आला
कान पियर्स गर्न सबै भन्दा राम्रो कसरी
निकोटिन बिना सिगरेट - धूम्रपान गर्नेहरूको लागि एक जीवन बयू
के तपाईं psychophysiological परीक्षा जान आवश्यक भएमा?
कसरी ग्रीनहाउस मा खुर्सानी बढ्न: सुझाव र चाल
सिद्ध आकारमा शरीर कायम राख्न एक दिन 20 मिनेट: को जांघों र चाक लागि अभ्यास
Sorbitol: लाभ र हानि, प्रयोग
रूसी लागि जर्मनी मा जब: काम कसरी पाउन?
कुर्कुच्चा अल्बर्ट - जीवनी र काम
बर्नाउल क्षेत्रमा: तथ्याङ्क, सुविधाहरू, रोचक तथ्य
स्वतन्त्र एक शट बच्चा गर्न?
ओवन मा चिकन संग फ्रेंच मा आलु: एक तस्वीर संग एक नुस्खा